Diyaardo Gargaar u Wadda Shacabka Beledweeyne Oo Ka Dagay Garoonka Dhuusamareeb
April 30, 2018 F.G 0
Wararka laga Helaayo Magalada Dhuusa Mareeb ayaa Sheegaya in Maalintii labaad ay Garoonka Diyaaradaha ee Magalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud ka degtay diyaarado Gargaar u sida Magalada Baladweyne Ayadoo uu Garoonkii Diyaaradaha ee Magaalada Baladweyne uu Xirmay . Waxaa Garoonka Diyaaradaha Dhuusamareeb ka degay labada Diyaaradood oo siday gargaar loogu talo galay dadka ka barakacay Guddaha Magaalada Baladweyne Waxaana ay Ku Sugan Duleedka Baladweyne. Sidoo kale Shalay waxaa Garoonka Diyaaradaha ee Dhuusamareeb ka degtay diyaarad siday gargaar ay ku deeqday Hay’adda Unicef,waxana deeqdaas gargaarka ah isla Maanta loo qebiyay Shacabka ku sugan duleedka Baladweyne. Dhinaca kale Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa Maanta gaaray Baladweyne si Shacabkii uu saameeyey fahaada Wabiga Shabeelle uu dhibaatada ula qeybsado.
SAWIR:Madaxweeyne Maxamed Farmaajo” Waxaan Beledweyne u Imid In aan idinla Qeybsado Xanuunka iyo Dhibka aad Ku Jirtaan”
Madaxweynaha Dowlada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta Safar Shaqo ah Ku Tagay magaalada Beledweyne Waxaana uu sheegay in xaalad bini-aadamnimo oo aad u daran ay ka jirto qeybo ka mid ah Gobolka Hiiraan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa kormeeray goobaha ay saameynta xooggan ku yeesheen fatahaadaha Wabiga Shabelle iyo xarumaha ay shacabka ku barakaceen, isaga oo ka xog-wareystay sidii dadaallada haatan socda loo xoojin lahaa masuuliyiinta Dowlad Goboleedka Hirshabelle, maamulka Gobolka Hiiraan iyo qaar ka mid ah duubabka dhaqanka oo uu hoggaaminayo Ugaas Xasan Ugaas Khaliif. Madaxweynaha ayaa yiri “Maanta waxaan halkan (Beledweyne) u imid inaan idinla qeybsado xanuunka iyo dhibka aad ku jirtaan. Waxaan ognahay in 100 kun oo qof dad kor u dhaafaya ay banaanka magaalada ku suganyihiin, walina ay jiraan dad ku go’doonsan gudaha magaalada.” Sidoo kale Madaxweynaha ayaa ugu baaqay dhammaan qeybaha bulshada in ay kala shaqeeyaan Guddiga Gurmadka Qaran ee ay Dowladda Federaalku u xilsaartay sidii gurmad ballaaran loogu fidin lahaa dadka ku barakacay fatahaadaha Wabiga Shabelle. Dhanka kale Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku bogaadiyay ciidamada AMISOM iyo Xoogga [Sii aqri]
Deg Deg: Maxamed Mursal Sh. C/raxmaan Oo Ku Guuleeystay Guddomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya
Wararka ka imaanaya xarunta golaha shacabka oo ay ka sococtay doorashada guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegaya in wareeggii ugu danbeeysay ee doorashada uu ku guuleystay Xildhibaan Maxamed Mursal Sh. C/raxmaan Oo Helay 147 Cod Xildhibaan Maxamed Mursal Sh. C/raxmaan ayaa waxaa wareeggii Labaad kula tartamayay Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yaroow waxaana ay kala Heleen Sida Tan: Guddomiye Ku Xigeenka 1aad ee Gollaha Shacabka Cabdi Weli Sheekh Ibraahim Muudeey Ayaa ku dhawaaqay natiijada Doorashada Waxaana uu sheegay in guud ahaan xildhibaanada codeysay ay gaarayaan 265 xildhibaan , Waxaana ay Kala Heleen Sida Tan 1:Xildhibaan Maxamed Mursal Sh. C/raxmaan 147 Cod 2:Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow 118 Cod
War deg deg ah :Madaxweyne Maxamed Farmajo Oo Garay Magalada Beledweeyne
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo goor dhaw gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo dhawaan ay ku dhufatay fatahaad ka dhalatay Wabiga Shabeelle iyo Roobab xoog leh oo ka da’ay gobolka iyo deegaannada ku dhaw dhaw. Wafdiga madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo todobaadyadii ugu danbeeyay ku sugnaa magaalada, maamulka gobolka Hiiraan iyo waxgaradka magaalada. Madaxweynaha ayaa ku guurgali doona xaalada fatahaada iyo sida ay u sameysay guud ahaanba magaalada oo 90% kiiba dadkii degenaa ka barakaceen. Wixii warar ah ee ka soo kordha waan idin soo gudbin doonnaa..
Degdeg:Codadka Musharaxiinta Oo la Tiriyay iyo Wareega Labaad Oo Loogudbay
Waxaa goor dhow la guda gali doonaa codeynta wareega labaad ee doorashada Guddoomiyaha Golaha shacabka oo ka soconeysa magaalada Muqdisho, kadib markii la soo gaba gabeeyay tirinta codadka Wareegii koobaad. 10 Musharax ayaa ku loo lamaya doorashadaan kadib markii inta aan laguda galin doorashada wareega koobaad uu Sheekh Aadan Madoobe ka tanasulay doorashada, kadibna ay isku soo hareen ilaa 10 Musharax. Haddaba Akhriso Codadka ay heleen Musharaxiinta Wareegga Koowaad. 1- Xildhibaan Maxamed Mursal Sh. C/raxmaan 83 2- Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow 69 3-Xildhibaan C/casiis Xasan Maxamed Laftagareen 54 4- Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla 19 5- Xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar -3 6- Xildhibaan Maxamud Macalin Yaxye 7 7-Xildhibaan Iimaan C/laahi Nuur. 3 8- Xildhibaan Cali Sheekh Nuur 16 Cod 9-Xildhibaan Saalim Caliyow Ibrow 17 10-Xildhibaan Shariif Sheekhunaa Maye 5 Afarta musharax ee ugu codka badan ayaa u gudbeysa wareega labaad ee doorashada Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Soomaaliya, oo hadda ka soconeysa xarunta Golaha shacabka ee magaalada Muqdisho.
Naadiga Chelsea Oo Qorshaynaysa In Ay La Wadaagto Garoonka Nadiga West Ham Muddo 4 Sano Ah
Kooxda chelsea ayaa lagu soo waramayaa in ay muddo 4 sano ah garoonka la isticmaali doonto kooxda West Ham xilli ay isku diyaarinayaan in ay dib u dhis ku sameeyaan garoonkeeda Stamford Bridge. Blues ayaa qorshaynaysay in ay muddo 4 sano ah ku ciyaaraan garoonka Wembley inta ay dib u dhisayaan garoonkooda haatan ka dhigayaan 62 kun oo kursi laakiin waxa loo sheegay in garoonka Wembley laga iibin doono Shahid Khan oo 1 bilyan ku dalbaday in uu ku iibsado garoonka. Qorshaha Khan ee Wembley ayaa ah in uu ah in uu garoonka ku ciyaarsiiyo ciyaaraha loo yaqaano NFL taas oo la macno ah in ay chelsea meel kale eegto. Chelsea ayaan bilaabi doonin dib u dhiska Stamford Brideg ka hor 2020 laakiin mustaqbalka Wembley ayaan ahayn mid cad waxana ay haatan isku diyaarinayaan in ay helaan meel kale sida laga soo xiganayo wargaska Th sun. Xilli ay shaki la,aan tahay in ayna West Ham Ogolaan doonin in ay chelsea la wadaagto garoonka hadana milkiilayaasha garoonaka ayaa albaabka u furay. “Waxa aan xaqiijinaynaa in ay [Sii aqri]
SAWIR:Madaxweynihii Hore ee i Ximin iyo Xeeb Oo Gaaray Magaalada Gaalkacyo
Wararka laga Helaayo Magalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug ayaa Sheegaya in uu Maanta gaaray Madaxweynihii hore ee Maamulkii ximin iyo Xeeb Maxamed Cabdullaahi Aadan(Tiiceey) isla markaana lagu soo dhaweeyey Magaalada Galkacyo. Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Galmudug ayaa Mudane Tiiceey ku soo dhaweeyey Magaalada Gaalkacyo,waxaana wehlinaya kuxigeenkiisii hore Cabdiraxmaan Shaati Cadde Iyo Xubno kale. Mudane Maxamed Cabdullaahi Aadan(Tiiceey) ayaa dhawaan soo gaaray Magalada Muqdisho,waxaana mudo Afar Sano ah uu ku xirnaa Wadanka Belgium-ka kadib markii lagu soo eedeeyey in uu xiiriir la leeyahay Burcad Baddeeda Soomaalida Inkastoo markii dambe dambigas lagu waayay. Si kastaba Ha ahaatee Mudane Tiiceey ayaa ahaa Asaasihii Maamulka Xibin iyo Xeeb Waxaana uu Hormuud u Naqday in ay Horumar Wanagsan Gaarto Magaalada Cadaado.
Xildhibaan Guure”Hir-Shabeelle Waa Magac u Yaal Waxna Kama Qaban Karto Fatahaada”
Xildhibaan Cabdiraxmaan Muxumed Guure oo ka mid ah xildhibaannada Hir-Shabeelle ayaa ka hadlay xaalada fatahaada maalmahaan dambe ka jirtay Magalada Baladweyne taas oo sababtay in badi dadkii ku noolaa Baladweyne ay barakaceyn. Xildhibaanka ayaa sheegay in Maamulka hir-Shabeelle aysan awood u laheyn in ay wax u qabtaan dadka fatahaada ay saameysay. “Maamulka Hir-Shabeelle waa magac u yaala waxqabad malaha waxana idin sheegayaa waxqabadku waa dhaqaale laakin Hir-Shabeelle majirto wax canshuur ah ay qaado iyo cid dibadaha iyo Caalamka uga yimaado sidaas darteed waxba uma qaban karto dadka ka barakacay fatahaada ayuu yiri xildhibaanka. Ugu dambeyn waxa uu ugu baaqay dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Beesha Calaamka in gurmad bani’aadanimo ay la soo gaaraan dadka ka cararay fatahaada Wabiga Shabeelle ee Magalada Baladweyne.
Guddomiye Yariisoow”Shacabka Hiiraan Waxaan Ku Deeqnay Lacag Boqol kun oo dollar ah”
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng Yarisow) ayaa sheegay iyadoo laga jawaabayo baaqa bulshada dhibaataysan ee Hiiraan ay ugu deeqeen lacag dhan 100,000 oo dollar (Boqol kun oo dollar), si wax loogu qabto dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay fatahaadda. Guddoomiye Yarisow oo Shir guddoomiyey shir deg-deg ah oo looga hadlayay dhibaatada ka dhalatay daadadka maansheeyay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa magacaabay guddi gurmad u fidiya shacabka dhibaataysan. Xubnaha Guddiga uu magacaabay Duqa Muqdisho ayaa waxaa hoggaaminaysa guddoomiye ku-xigeenka Arrimaha Bulshada ee M/mulka Gobolka Benaadir Marwo Basmo Caamir Axmed, waxana xubno ka ah qaar kamid ah guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo agaasimeyaal heer gobol ah, waxayna ka shaqeyn doonaan in shacabka Caasimadda ay dhaqaale ka aruuriyaan. “Xaalad adag ayaa laga soo sheegayaa Beledweyne dadka qaarkood waxa ay ka carareen guryahooda iyagoon sidan wax alaab ah kadib markii ay biyuhu u saamixi waayeen. Ka maamul ahaanna waxaan qaadnay tallaabooyinkii nala gudboonaa si dadka loo badbaadiyo, waxaana ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed iyo Beesha Caalamka in gar gaar deg-deg ah lala gaaro dadka wabigu [Sii aqri]
Senatar Siciido”Dowlada Soomaaliya Iyo Hey’adaha Waa in ay Wax Ka qabtaan Fatahada Wabiga”
Senator Siciido Xasan Cusmaan oo katirsan Golaha Aqalka Sare Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in Dowladda Federaalka laga doonayo in ay la xisaabtanto hay’adaha Samafalka. Waxa ay si gaar ah u sheegtay in ay jiraan Hay’ado lacago ku bixiya Meelo aanan loo baahneen, sidaa awgeed waxa ay Dowladda u jeedisay in ay ku amarto in ay qodaan Meelahaay Ciid Buuxisay ee Wabiyada Jubba iyo Shabeelle. Sababaha keena in ay Karkaarada jabsadaan oo ay sameeyaan Fatahaadda waxa ay ku tilmaamay in ay tahay Ciidaas xirtay, kaliyana looga bad-baadi karo fatahaadda ay sameynayaan In la qodo Keydad biyaha ay galaan Markii uu buux dhaafiyo. Dalka waxa ay sheegtay in uu kasoo baxay Abaar muddo heysatay, taasina ay ka dhalatay Biyaha Wabiga oo aanan laheyn Keydad marka uu biyo yareeyo dib loo isticmaalo. Qandaraasyada Hay’adaha ay ku bixinayaan Mashaariicda aanan Dadka waxba u tareen ama Baahida loo qabo ayay sheegtay in la talin lagala sameeyo si lacagtaasi loogu howlgalo si biyo Xireeno, Keydad iyo qodis loogu sameeyo Wabiga. Dhanka kale Waxaa Doowlada loo Sheegaya in ay yareyaan lacagaha [Sii aqri]